ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်း• DutchtownSTL.org
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်း
နေခြည်, Dutchtown ပင်မလမ်းများ, ပြီးနောက် Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင် မင်းတို့ငါတို့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ဝမ်းသာနေတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းသိရန်နှင့် Dutchtown နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုများဆောင်ကြဉ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့ကိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook Group သို့ဝင်ရောက်ပါ။
Dutchtown စီးပွားရေးကွန်ယက်သည်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည် Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများမှစကားဝိုင်းများ၊ အရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေခြင်းနှင့်အကူအညီရယူနိုင်သောအုပ်စုဖြစ်သည်။ ယနေ့ Join!
ကျွန်တော်တို့ဟာမြို့တော်၊ အစိုးရမဟုတ်သလိုကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်အနီးဝန်းကျင်၌ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကိုစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများဖြစ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် Dutchtown Main Streets သည်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆွဲဆောင်ရန်၊ နေရာများ၊ နေရာများနှင့်မျက်နှာများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်၌နေထိုင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ Dutchtown Community Improvement District သည်ရပ်ကွက်အားလုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့်စိမ်းလန်းမှုဖြစ်စေရန်အိမ်ခြံမြေခွန်အနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုသောအထူးအခွန်ကောက်ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ DutchtownSTL အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုနဲ့ရပ်ကွက်ကိုငါတို့စျေး ၀ ယ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည်ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်မှကောက်ခံသည့်အခွန်များအပြင်တစ် ဦး ချင်းလှူဒါန်းမှုများ၊ ထောက်ပံ့ငွေများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်ရန်ပုံငွေမိတ်ဖက်များဖြင့်စုဆောင်းထားသည့်ငွေပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုသင်ကူညီလိုပါကသင်လုပ်နိုင်သည် Dutchtown Main Streets သို့လှူဒါန်းပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်နှင့်တည်ထောင်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆောက်လုပ်သည် စီးတီး၊ ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်အရင်းအမြစ်များစာရင်း လုပ်ငန်းစတင်ရန်နှင့်ခွင့်ပြုချက်၊ လိုင်စင်နှင့်အခွန်အခများကိုအမြဲတမ်းရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့်သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရန်အထောက်အကူပြုသည့်လမ်းလျှောက်လမ်းညွှန်များဖန်တီးနေပါသည်။ Google My Business ကိုရယူရန်လမ်းညွှန် [အပိုင်းတစ် နှင့် စိတျအပိုငျးနှစျခု] ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေသည့်ဥပမာများဥပမာ။ ) ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုသင့်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်စေမြှင့်တင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ရပ်ကွက်အတွင်းသင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာများအကြောင်းကိုဖြန့်ဝေကူညီပေးပါ။ ငါတို့နှင့်သာဆက်သွယ်ပါ.
ငါတို့သည်လည်းမှန်မှန်အပေါ် post DutchtownSTL ဘလော့ဂ် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကူအညီများအတွက်အခွင့်အလမ်းများပေါ်လာသည့်အခါ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားကူညီရန်ပို့စ်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် စိန့်လူးဝစ္စမြို့မှအသေးစားစီးပွါးရေးထောက်ပံ့ငွေအတွက်လျှောက်ထားပါ, ငါတို့အပေါ်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခဲ့သည် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘေးအန္တရာယ်ချေးငွေလျှောက်ထား နှင့် Coronavirus တုံ့ပြန်မှုအက်ဥပဒေအောက်တွင်စည်းမျဉ်းများစီမံခန့်ခွဲ။ နောက်ထပ်သတင်းများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုသင်ရှာနိုင်သည် DutchtownSTL ၏ Facebook စာမျက်နှာတွစ်တာမှာ @dutchtownstlသို့မဟုတ် Dutchtown စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ Facebook အုပ်စု.
DutchtownSTL သည်ကျယ်ပြန့်သောစာရင်းပြုစုထားသည် ရပ်ကွက်အရင်းအမြစ်များဒေသခံတာဝန်ရှိသူများ၊ အသုံးအဆောင်များနှင့်အရေးပေါ်မဟုတ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဆက်သွယ်ရန်။ ငါတို့သည်လည်းလမ်းညွှန်များဖန်တီးပါတယ် နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုနှင့်အစီရင်ခံစာများဖြည့်စွက်, သင်၏အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကျွမ်းကျင်သူနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် စိန့်လူးဝစ္စရဲတပ်ဖွဲ့သို့ပြproblemsနာများတိုင်ကြားခြင်း.
၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် UrbanMain ပဏာမခြေလှမ်း, Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများအောက်မှာအလုပ်လုပ်ကြသည် Main Street4+ 1 Point ချဉ်းကပ်မှု။ အိမ်နီးချင်း ဦး ဆောင်သောငါး ဦး ကော်မတီများ တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပြီး Downtown Dutchtown နှင့် Dutchtown Community တိုးတက်မှုခရိုင်ဘုတ်အဖွဲ့သို့သတင်းပို့ပါ။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကအချိန်ပိုင်းငှားရမ်းထား Dutchtown ကြီးထွားမှုမန်နေဂျာ ဤလှုပ်ရှားမှုများကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်ကူညီသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အများစုမှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းမောင်းနှင်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown ကော်မတီများနှင့်တွေ့ဆုံပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်မတီ (၅) ခုလုံးကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီးအသင်းဝင်ရန်စာရင်းသွင်းနိုင်သည် Dutchtownstl.org/committeesသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သည်ကိုခြုံငုံ။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ဒီဇိုင်းကော်မတီသည်ပတ် ၀ န်းကျင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်လုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနီးအနားရှိအသွင်အပြင်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့် Dutchtown ၏ထူထပ်သောနှင့်သမိုင်းဝင်တည်ဆောက်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ စတိုးအသွင်အပြင်တိုးတက်မှုသို့မဟုတ်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ design@dutchtownstl.org.
စီးပွားရေးတက်ကြွမှုကော်မတီသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များနှင့်တည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့သည်။ ဆက်သွယ်ရန် ev@dutchtownstl.org ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများအတွက်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကော်မတီသည် Dutchtown ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဝဘ်ဆိုက်နှင့် Dutchtown ၏လူမှုမီဒီယာလိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံခန့်ခွဲပြီးသင့်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောစကားလုံးများကိုဖြန့်ချီချင်ပါသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစိတ်ကူးများ၊ ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရေးအတွက်ဆက်သွယ်ပါ promotion@dutchtownstl.org.
အဖွဲ့အစည်းကော်မတီသည် Dutchtown တွင်အသိုင်းအဝိုင်းကိုအဟောင်းနှင့်အသစ်မိတ်ဖက်များမှတစ်ဆင့်တည်ဆောက်သည်။ Dutchtown တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်များ၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများအားချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အတွက်အရင်းအမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကူညီရန်ဆက်သွယ်ပါ organization@dutchtownstl.org.
လုံခြုံစိတ်ချရသောသန့်ရှင်းရေးနှင့်အစိမ်းရောင်ကော်မတီသည်အလှဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လုံခြုံခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ နေထိုင်သူများနှင့် visitors ည့်သည်များအားဆွဲဆောင်ရန် Dutchtown ၏အမြင်နှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်သည်။ ဆက်သွယ်ရန် scg@dutchtownstl.org ပါဝင်ပတ်သက်ရ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အိမ်နီးချင်းများကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းများသည်အောင်မြင်ပါသည်။ Dutchtown ကိုအံ့, စရာ၊ မတူကွဲပြားမှုနှင့်တက်ကြွမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ခက်ခဲသောအလုပ်လိုအပ်သည်။
ကော်မတီတစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်ပါ, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အတွေးအခေါ်များ၊ မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူ၊ သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ ဒိန်းမတ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုသိကျွမ်းရန်နှင့် Dutchtown တွင်ဖြစ်ပျက်သောအမှုကြီးအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိရန်။ လူတိုင်းအတွက်တိုးတက်လာသော Dutchtown ရပ်ကွက်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာရှိသည်။
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် စက်တင်ဘာလ 21st, 2021 .
ဒိန်းမတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်း